Ahoana ny fomba hamantarana ireo tariby manjelanjelatra sandoka | Vaovao IPhone
Na dia tsy nisy na inona na inona fantatra momba ny lozam-pifamoivoizana nisy tamin'ny iPhone na iPad noho ny hafanana be loatra na ny fihoaram-pefy nandritra ny fotoana ela, dia azo antoka fa mahafantatra vaovao momba izany ianao, na dia mety hahafaty aza amin'ny tranga sasany. Ny fampiasana batterie ivelany, tariby na charger tsy voamarin'ny Apple dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny fitaovana, hampihena ny androm-piainany, ary hiteraka hafanana be loatra aza ilay fitaovana ary hipoaka. Apple dia nazava tsara momba izany tamin'ny fotoana rehetra, na ny mandeha lavitra aza manova ny tariby tsy tena izy ho an'ny tany am-boalohany amin'ny vidiny mihena be. Ankehitriny ny orinasa dia namoaka amin'ny tranokalany torolàlana mazava tsara momba ny fomba hamantarana tariby voamarina avy amin'ny iray tsy voamarina.
Raha mampiasa fitaovana fanaovana jiro na sandoka tsy fantatra ianao dia mety hanana an'ireto olana ireto:
Mety ho simba ny fitaovana iOS
Mety ho simba mora foana ilay tariby
Ny faran'ny mpampifandray dia mety ho lasa tafasaraka, tafahoatra na tsy mifanaraka tsara amin'ny fitaovana.
Mety tsy ho vitanao ny mampifangaro na mametra ny fitaovanao
Ny torolàlana dia miaraka amin'ny sary, ary manomboka amin'ny fomba hamantarana ilay mpampifandray ny tselatra, hatrany amin'ireo soratra natao tamin'ny mpampifandray, ny antsipirian'ny faran'ny USB ary ny lahatsoratra amin'ny fonosana tariby. Zava-dehibe ny manasongadina ny zava-misy fa tsy ny Apple ihany no mivarotra tariby voamarina, fa izay mpanamboatra nahazo alalana sy voamarin'ny Apple dia afaka manao izany, Ka mety misy modely maro miaraka amin'ny toetra sy ny vidiny samihafa eny an-tsena izay manome antsika antoka mitovy amin'ny an'ny Apple tany am-boalohany.
Azonao atao ny mahita ny torolàlana rehetra amin'ny teny espaniola ny tranonkala Apple ofisialy miaraka amin'ny sary an-tsary, ary amin'izany jereo ny fahasamihafana miharihary eo amin'ireo mpampifandray voamarina sy tsy voamarina, ny sasany amin'izy ireo dia efa mampiseho fa ny kalitaon'ny segondra dia mamela be faniry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana no amantarana ireo tariby tselatra sandoka
Fomba fiasa 7 iOS izay efa azonao ananana amin'ny iOS 9 [Jailbreak]
Ahoana raha tsy manana ny andalana antena ny iPhone manaraka?